लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जिम्मेवारीपूर्वक बन्न आग्रह | Bridge to Nepal and Nepali
लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जिम्मेवारीपूर्वक बन्न आग्रह
काठमाडौँ, वैशाख १८ – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि पत्रकारहरुको भूमिका अहम हुने भन्दै जिम्मेवारीपूर्वक कलम चलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। पत्रकार महासंघको नवनिर्मित भवन उद्घाटनका क्रममा बुधबार यहाँ राष्ट्रपति यादवले त्यस्तो बताउनुभएको हो।
लोकतन्त्र प्राप्तीमा नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिकाको प्रसंसा गर्दै डा. यादवले भन्नुभयो “जहाँ लोकतन्त्र रहन्छ त्यहाँ प्रेस बलियो हुन्छ, विना लोकतन्त्रको प्रेसको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन।” प्रेस स्वतन्त्रता रहेकै ठाउँमा नागरिकहरु सूचनाको भोको नरहने चर्चा गर्दै राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको जग हाल्नमा प्रेसले ठूलो योगदान गर्‍यो, अब त्यसलाई संस्थागत गर्नमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ।” वर्षदिनमै नयाँ संविधान जारी गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा नेपाली प्रेसले अझै भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नयाँ संविधान जारी भएमा मात्रै देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउँदै राष्ट्रपति डा. यादवले नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणले पत्रकारको व्यवसायिक सुनिश्चितता र दक्षतामा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले चुरे क्षेत्रको विनासप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै नेपालका ६० प्रतिशत जनताको आश्रयस्थल रहेकाले त्यसको संरक्षणमा समेत कलम चलाउन पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारको तर्फबाट महासंघको भवन निर्माण तथा वृत्ति विकासका निम्ति नियमित सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। वर्तमान सरकारले संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने पहिलो काम रहेको र दोस्रो काम सुशासन कायम गर्नु रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा मन्त्री रिजालले वर्तमान अध्यक्ष शिव गाउँलेको समूहले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ भवन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले सरकारको आर्थिक सहयोग तथा महासंघका सबैको सामूहिक प्रयासले भवन निर्माण सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले पारदर्शी तथा बैज्ञानिक तरिकाले भवन निर्माण गरिएको बताउनुभयो। भवन निर्माणका लागि ४ करोड २ लाख रुपिया खर्च भएको पनि अध्यक्ष गाउँलेले जानकारी दिनुभयो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले विनियोजन गरेको एक करोड रुपियाँ सहयोगमा शुरु भएको भवन निर्माणका लागि सो पछिका सरकारले समेत आवश्यक सहयोग गरेको गाउँलेले जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति डा. यादवले तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले महासंघको भवन निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहयोग पुर्‍याएको भन्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभयो।
अध्यक्ष गाउँलेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिना, जगत नेपाल लगायतले पत्रकारहरुको हकहित तथा व्यवसायिक दक्षताका लागि भवनले ठूलो योगदान दिने चर्चा गर्नुभयो। राष्ट्रपति डा. यादवले उद्घाटन गर्नुभएको नवनिर्मित भवनको शिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी प्रचार विभाग प्रमुखहरु, महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
अर्को » अर्घाखाँची दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु, २७ जना घाइते »
पहिलाको » वैचारिकता एकातिर, नेतृत्वका गठबन्धन अर्कोतिर »